मोबाइल फोनबाट निस्कने रेडिएसनको असर कहाँ–कहाँ ? – NawalpurTimes.com
प्रकाशित : २०७७ माघ २१ गते १०:४६
कोरोना महामारीपछि विश्वभर गरिएको लकडाउनपछि मोबाइल तथा ग्याजेटमा सक्रिय हुने क्रम अझै बढेको छ । अधिकांश व्यक्तिले यो अवधिका आफ्ना काम ग्याजेटबाटै गरेका थिए । यसकारण लकडाउनका वेला ग्याजेटबाट स्वास्थ्यमा हुने असर अझै बढेको न्युरोलोजिस्ट डा. जया सत्याल बताउँछिन् । उनका अनुसार यसको असरबारे ध्यान नदिने हुँदा समस्या गौण बनिरहेका छन् । तर, आँखा दुख्ने, निद्रा नलाग्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नेजस्ता न्युरोलोजिकल डिसअर्डरहरू मोबाइलको अत्यधिक प्रयोगबाटै हुने गरेको पाइन्छ । उनी भन्छिन्, ‘यस्ता समस्या लिएर बढीजसो बालबालिका अस्पतालसम्म आउने गरेका छन् । लकडाउनको समयमा यस्तो समस्या बढी भएको अनुमान छ । कोभिडका कारण अस्पतालसम्म पुग्ने केसहरू कम भए पनि यसले भविष्यका जटिल समस्या निम्त्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
बदलिँदो जीवनशैलीसँगै मोबाइल फोन अत्यावश्यकजस्तै भइसकेको छ । योसँगै यसका असरबारे चासो नदिँदा स्वास्थ्य समस्या पनि बढिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । सुत्ने वेलामा मोबाइल सिरानीमा नराख्न, फोनमा कुरा गर्दा सकेसम्म कानबाट टाढा राख्न वा अन्य डिभाइसको प्रयोग गर्न, बालबालिकालाई फोनको प्रयोग घटाउन वा यसले पार्ने असरको नियन्त्रण उपाय अपनाउन न्युरोलोजिस्टहरू सल्लाह दिन्छन् ।-नयाँ पत्रीका बाट